देहरादूनमा किन निर्घात कुटिए नेपाली विद्यार्थी ? - Jhilko
गृहपृष्ठ ∕ प्रवास ∕ देहरादूनमा किन निर्घात कुटिए नेपाली विद्यार्थी ?
देहरादूनमा किन निर्घात कुटिए नेपाली विद्यार्थी ?
झिल्को डटकम २०७७, कात्तिक १३ गते १२:५८ मा प्रकाशित
भारत देहरादूतस्थित शाक्य गुम्बाले सञ्चालन गर्दै आएको बोर्डिङ स्कूलबाट घर फर्किन खोज्ने ५१ नेपाली विद्यार्थीमाथि निर्घात कुटपिट भएको छ । कुटपिटमा परेकामध्ये ४२ जना घाइते भएकाा छन् ।
काठमाडौंको बौद्धस्थित आनी गुम्बासम्म सो खबर आएपछि विद्यार्थीका अभिभावकले सरकारसँग उद्दारका लागि आग्रह गरेका छन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका निवर्तमान सदस्य मोहना अन्सारीले ती विद्यार्थीको उद्दारका लागि आग्रह गर्दै गरेको ट्विटमा नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले ‘दूतावासले खोजखबर लिन्छ’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । त्यस्तै, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सत्यतथ्य बुझ्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको जनाएका छन् ।